Fanadihadiana sy fanatsarana ny olan'ny kalitao mahazatra amin'ny famaranana lamba
Mametaka lace lace
Nylon sy spandex lamba
Akanjo landihazo sy nylon
Mametaka dantelina simika
Lamba vita amin'ny kofehy simika
Karakarao amin'ny kofehy peta-kofehy
Lamba fehy vita amboradara
1. Olana amin'ny kalitao mahazatra amin'ny famaranana malefaka:
Tsy afaka mahatratra ny fahatsapana mety:
Ny fomba malefaka amin'ny famaranana malefaka dia miovaova arakaraka ny takian'ny mpanjifa, toy ny malefaka, malefaka, malefaka, malefaka, malama, maina, sns., Arakaraka ny fomba samihafa no misafidy fanalefahana hafa. Ohatra, ao amin'ny sarimihetsika, misy endrika samihafa amin'ny sarimihetsika malefaka, ny fahalemeny, ny tsy fitoviana, ny fikororohana, ny fandokoana, ny fihoaran'ny lamba dia tsy mitovy; Ao amin'ny menaka silikôla, ny toetra mampiavaka ny menaka silikônika nohavaozina tamin'ny alàlan'ny fototarazo novaina samy hafa ihany koa, toy ny diloilo silika amino, menaka silika hydroxyl, menaka silika novaina epoxy, menaka silika novaina karboksil sy ny sisa.
Mivadika mavo ny loko:
Amin'ny ankapobeny ny firafitry ny sarimihetsika silila sy menaka silika amine ateraky ny fandokoan'ny amino. Ao amin'ny sarimihetsika, sarimihetsika cationic malefaka, mahatsapa dia tsara, mora amin'ny adsorption mora amin'ny lamba, fa mora ny lokon'ny volon'ny mavo, hydrophilic, toy ny famerenana amin'ny laoniny ny sarimihetsika cationic ho lasa fototran'ny menaka malefaka, hihena be ny mavo, tokony hanatsara ny hydrophilic koa, toy ny sarimihetsika cationic composite sy hydrophilic silicone oil, na miaraka amin'ny hydrophilic finish agents agents, dia hanatsara ny hydrophilicity.
Ny sarimihetsika Anion na ny sarimihetsika tsy ion dia tsy mora mavomavo, ny sarimihetsika sasany tsy mavo, ary koa tsy misy fiantraikany amin'ny hydrophilicity.
Ny menaka silikônina amino no menaka silikôly be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao, fa satria ny amino dia hanova ny lokony sy hihamavoana, ny avo kokoa ny lanjan'ny amoniaka, ny lehibe kokoa ny mavo, dia tokony hovaina ho menaka silika mavo mavo na ovaina polymetika, silônôma novaina epoxy menaka tsy mora mavo.
Ankoatr'izay, ny surfactants cationic toy ny 1227, 1831, 1631 dia ampiasaina indraindray amin'ny polymerization emulsion ho emulsifiers, izay mety hamokatra mavo ihany koa.
Rehefa emulsifying menaka silicone, ny fampiasana emulsifier, ny "effipe d'exploitation" dia samy hafa, dia hiteraka toe-javatra samihafa amin'ny fanendahana sy ny hazavana loko, dia fiovan'ny loko.
(3) hydrophilicity lamba nihena:
Ny olan'ny firafitry ny sarimihetsika matetika sy ny menaka silikôlô ao anaty horonantsary taorian'ny tsy fahampian'ny fototarazo fanovozana rano, ary nakatona toy ny fibre cellulose hydroxyl, volom-borona carboxyl, amino ary ivon-tseriterena rano hafa dia nahatonga ny fihenan'ny fitrohana rano, tokony hisafidy izay azo atao anion, horonantsary siliona tsy ionona sy karazana menaka silôly.
(4) teboka maizina:
Ny tena antony dia satria tsy nodiovina talohan'ny fitsaboana ny lamba, ary maizina kokoa ny loko rehefa mandoko. Na sombin-javatra be loatra ao amin'ny fandroana fandokoana, akanjo ba misy volom-borona sy voninkazo, loko mifangaro amin'ny lamba; Na solika mitsingevana ny solika miparitaka ateraky ny teboka menaka maizina; Na fitaovana vita amin'ny tarazo amin'ny VAT loko amin'ny lamba; Na ny loko amin'ny toe-javatra samihafa dia mitambatra ho teboka maizina; Na ny ionan'ny magnesium calcium calcium ao anaty rano sy ny loko mitambatra ao anaty lamba ary antony hafa. Mba ho fitsaboana kendrena, toy ny fitsaboana mialoha hanampiana ny solika solika ho fanadiovana, fandokoana ny SIDA hampiasana foam kely, tsy misy additives foam, agents de defoaming hisafidy ny karazana menaka tsy mitsingevana, asiana agents chelating hanatsarana ny kalitaon'ny rano, ampio manaparitaka solubilizing hisorohana ny fampivalanana ny loko, mampiasa fitaovana fanadiovana ara-potoana amin'ny fanadiovana ny varingarina.
(5) teboka maivana:
Ny antony lehibe indrindra dia talohan'ny tsy nitovian'ny fitsaboana, ny ampahany sasany amin'ny Mao Xiao mahantra, dia nandà tsy handoko, na amin'ny fandavana ny fandokoana fitaovana, lamba na ny fitsaboana amin'ny savony calcium savony, savony, sns., Na landy tsy mitovy, tsy mitovy na vokatra semi-maina, na lamba misy sulphate sodium, levona soda ary solida hafa, na nolokoina alohan'ny fanamainana rano, na fanodinana fandokoana vita malefaka miaraka amin'ny additives toy ny tasy. Toy izany koa, tsy maintsy fitsaboana kendrena izy io, toy ny fanamafisana ny fitsaboana mialoha, ny fisafidianana mpitsabo mpanampy mialoha ny fitsaboana dia tsy tokony ho mora mamorona savony kalsioma sy manezioma, ny fitsaboana alohan'ny fitsaboana dia tsy maintsy hitovy sy feno (mifandraika amin'ny fisafidianana mpitsikilo, penetrant io. , chelating dispersant, mercerizing penetrant, sns.), sodium sulfate, soda dia tokony hiditra ao amin'ny VAT ary tsy maintsy manamafy ny fitantanana ny famokarana.
6. Toerana Alkali:
Ny antony lehibe indrindra dia ny fanesorana alkaly aorian'ny fiterahana (toy ny fanosotra, mercerisation) dia tsy madio na mitovy fanamiana, ka miteraka famokarana tady alkaly, noho izany dia tokony hohamafisintsika ny fizotry ny fanesorana alkaly amin'ny fizotran'ny fitsaboana.
Mety misy ireto antony manaraka ireto:
A. Tsy tsara ny fitaovan'ny horonantsary, misy fanamontsananana sakana mifikitra amin'ny lamba;
B. Rehefa avy be loatra ny volavolan-tsarimihetsika, ao anaty lamba ivelan'ny varingarina, ilay lamba misy tasy malefaka;
C. Ny kalitaon'ny rano dia tsy tsara, ny hamafin'ny avo loatra, ny fahalotoana ao anaty rano sy ny fatotra mifamatotra amin'ny lamba. Ny orinasa sasany aza dia mampiasa hempetaphosphate sodium na alum hanasitranana rano, ireo akora sy loto ireo amin'ny rano dia miendrika flocculent, ao anaty fandroana fitsaboana malefaka aorian'ny lamba misy pentina;
D. Fototra lamba miaraka amin'ny fitaovana anion, amin'ny fanodinana malefaka, ary ny fanalefahana kationika mitambatra ho tasy, na ny lamba ambonin'ilay alkaly, ka mihamalefaka kokoa ny fanalefahana;
E. Hafa ny firafitra manalefaka, ny sasany amin'ny mari-pana ambony kokoa dia mahatonga ny mpanalefaka avy amin'ny fanjakana voahosotra ho lasa malina mifikitra amin'ny lamba sns.
F. Ny mpandefitra toy ny tara ary ny akora hafa ao anaty varingarina dia nianjera ary niraikitra tamin'ny lamba.
Tondra-tsolika solika silika:
Ity no karazana toerana sarotra indrindra, ny antony lehibe indrindra:
A. Ny lanjan'akanjo PH dia tsy tonga amin'ny atsy na aroa, indrindra amin'ny alikaola, izay miteraka menaka mitsingevana menaka silikola;
B. Ny kalitaon'ny rano fandroana fitsaboana dia mahantra loatra, avo loatra ny hamafiny, menaka silika ao amin'ny> 150PPM ny hamafin'ny rano dia mora mitsingevana menaka;
C. Ny olana ara-kalitaon'ny solika silika dia misy ny emulsification tsy dia tsara (tsy mahomby ny fifidianan'ny emulsifier, ny fizotran'ny emulsification tsy dia tsara, ny partie emulsification be loatra, sns.) Ary ny fanoherana ny volo (indrindra ny olan'ny solika silika, toy ny kalitaon'ny solika silika, rafitra emulsification, karazan-tsolika solika, dingana fanosotra menaka silikola, sns.).
Azonao atao ny misafidy menaka silikôlona izay mahatohitra ny fanetezana ny volo, ny electrolyte ary ny fiovan'ny PH, fa kosa tokony hasiana fiheverana ny fampiasana menaka silikôla sy ny manodidina azy. Azonao atao ihany koa ny misaina ny fisafidianana ny diloilo silôlôly hydrofilika.
9. Volo ratsy:
Fluff miaraka amin'ny fiasan'ny masinina tsy mahomby (toy ny fanaraha-maso ny fihenjanana, ny hafainganam-pandehan'ny rojo, sns.) Misy fifandraisana akaiky, ho an'ny fihorakorahana, fanalefahana (fantatra amin'ny anarana hoe savoka), ny coefficient ny fikorontanana mihetsiketsika sy tsy miovaova no lakilen'ny lamba fanaraha-maso, ny fiomanana dia ny lakilen'ilay «soft fuzz», raha malefaka miaraka amin'ny mahantra, dia hitarika mivantana tsy mahomby, na hiteraka fiovan'ny bla na ny sakany aza.
2. Olana amin'ny kalitao mahazatra amin'ny famaranana ny resin:
Vokatry ny formaldehyde maimaim-poana amin'ny resina na firafitra n-hydroxymethyl an'ny famotehana resina ny formaldehyde vokatry ny atiny formaldehyde mihoatra ny fetra. Ny resina formaldehyde ambany ambany na résin tsy formaldehyde dia tokony hampiasaina.
Mazava ho azy, ny loharanon'ny olana formaldehyde dia malalaka dia lehibe, toy ny fixing agents Y, M, softener MS - 20, S - 1, agresur AEG, FTC, RF adhesive, THPC retardant amin'ny afo ary ireo additives hafa indraindray koa dia mahatonga formaldehyde mihoatra ny fenitra. Mandritra izany fotoana izany, ny fifindra-monin'ny formaldehyde amin'ny rivotra dia mety hiteraka formaldehyde be loatra amin'ny lamba koa.
Olana mavo na miova loko:
Ny famaranana ny resin, amin'ny ankapobeny dia miteraka mavo, noho izany ny fifehezana ny sandan'ny PH an'ny mpandraharaha famaranana ny resina, misy singa asidra, singa mpiorina, araka izay azo atao mba hampihenana ny fiovan'ny loko, ny fiovan'ny loko.
(3) olana mitotongana mafy:
Ny famaranana ny resin ankapobeny dia miteraka fihenam-bidy matanjaka, azo ampiana mpiaro amin'ny fibre, toy ny emulsifier polyethylene wax emulsifier.
Ny famaranana ny resin ankapobeny dia hiteraka ny fahatsapana mihamafy, azo ampiana fangaro malefaka, saingy tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny famaranana ny resina. Mahatsiaro ho mihatsara, mba hanatsarana ny olana mitete hery dia nihatsara ihany koa. Fa ny fahatsapana fa ny tampon'ny resin dia mitaky fiandrasana mafy ny olana iray ateraky ny antony toy ny resina sy ny fanamainana, te-hanatsara hatrany.
3. Olana hafa amin'ny kalitao:
(1) ion-by be loatra:
Ny metaly metaly, Cu, Cr, Co, Ni, zinc, Hg, As, Pb, Cd amin'ny vokatra fanondranana toa ny fitsapana, raha be loatra, dia misy vokany lehibe koa, toy ny formaldehyde ao amin'ny vondrona fanampiny, kely kokoa ity karazana metaly metaly ity, fa ny sasany ny additives dia mety hiteraka be loatra, toy ny emulsion antimony trioxide antimony mirindra izay misy mercury marobe, mpiasan'ny rano Cr, PhoboTexCR (ciba), Cerolc (sandoz) misy chromium. Rehefa voahodina miaraka amin'ny loko antonony ny volon'ondry, ny diky antonony ampiasaina dia dichromate potasioma na dichromate sodium na chromate sodium, dia hihoatra ny fetra ny Cr6 +.
Olana amin'ny fanovana loko:
Ao aorian'ny famaranana, ny fiovan'ny loko dia bebe kokoa, tsy maintsy mitandrina izy rehefa misafidy loko mandoko, rehefa voaporofo ny fandokoana, tsy maintsy manohy ny famaranana mifanaraka amin'ny fizotrany, dia handoko amin'ny famaranana ny fitsarana mba hisafidianana ny anjara asa fanampiana omena ny ny fisarihana, mazava ho azy, dia nisafidy tsara kokoa tsy hiteraka fiovan'ny loko aorian'ny famaranana ny solosaina no vahaolana mety indrindra, saingy matetika izany dia mety ho fetra (toy ny mpiasan'ny bakteria misy varahina ny tenany, misy loko koa ny mpiasan'ny rano, misy chromium mety hanova ny lokon'ny lamba ), ary koa ny fandinihana ny lamba miloko mandritra ny fanamainana manasitrana ny lokon'ny loko sy ny fiovan'ny loko ateraky ny sublimation ny loko ary ny hafanana ambony ateraky ny anton-javatra toy ny mavo.
(3) APEO matavy loatra:
Ny APEO ho toy ny tondro dia voafehin'ny firenena sasany ihany koa, ny mari-pamantarana sy ny fiomanana amin'ny fikolokoloana, ny mpitsikilo, ny fanaovana pirinty ny lotion amin'ny net, ny mpamatsy ary ny mpanalefaka rehefa vita ny fifandraisan'izy rehetra, toy ny emulsifier ao amin'ny TX, NP izay be mpampiasa ankehitriny andian-surfactant ho toy ny akora mpanampy, sarotra ny misoroka azy, ny fomba tokana dia ny fandokoana ny ozinina amin'ny fampiasana enti-miaro ny tontolo iainana, ajanona tanteraka ny fampidirana APEO sy ireo fitaovana mampiditra poizina sy manimba ao amin'ilay orinasa.
Fotoana fandefasana: Feb-26-2020
10F, Shanya International Center, Fuzhou Hi-tech Zone, Fuzhou City, 350108, Fujian, Sina